Ny kinova WhatsApp manaraka dia hamela anao hamafa hafatra | Vaovao momba ny gadget
Ny kinova WhatsApp manaraka dia hamela anao hamafa hafatra
Araka ny famoahana andianà pikantsary amin'ny andiany manaraka an'ny WhatsApp, mazava ho azy ireo mpampiasa azy dia nampihatra fampiasa vaovao hahafahan'ireo mpampiasa mamela azy hamafa hafatra amin'ny fomba tena tsotra, amin'ny alàlan'ny fihazonana ny lahatsoratra nalefanao fotsiny ary te-hamafa segondra vitsy. Ity endri-javatra vaovao sy mahaliana ity dia hiasa amin'ny resaka ataon'ny tsirairay sy ny vondrona.
Tsy isalasalana fa miatrika izay mety ho iray amin'ireo fanatsarana indrindra takian'ny ankamaroan'ny vondrom-piarahamonina iray izahay hatrizay izay mpampiasa manana fotoana mety hamafana ilay hafatra nalefanay tsy nahy. Ny zavatra mbola hamafisina, satria misy feo maro milaza zavatra iray na hafa, dia ny hoe azo esorina ve izany hafatra izany alohan'ny hamakian'ny olon-kafa azy na raha ny mifanohitra amin'izay dia azontsika atao ihany koa ny mampanjavona azy na dia efa nisy aza ilay sivana manga iray nampiady hevitra.
WhatsApp dia mety miasa amin'ny safidy mamela ny mpampiasa hamafa hafatra efa nalefa.
Araka ny hitanao amin'ny sary hita eo am-pamaranana ity fidirana ity, amin'ny pikantsary dia ahitanao an'izany, rehefa mamafa ny hafatra iray ny mpampiasa, mampiasa ilay fiasa natao batemy ho 'manafoana', ny mpampiasa kendrena dia mahazo hafatra ahafahan'izy ireo mamaky, amin'ny teny anglisy tonga lafatra.'Nofoanan'ny mpandefa ny hafatra'. Araka izany, ilay olona hahatongavan'ity hafatra ity dia hahafantatra fa namafa hevitra izahay na dia tsy misy fomba hahitana izay nosoratanay aza.
Ho antsipiriany farany, farafaharatsiny izao, Tsy naneho hevitra momba ity famoahana ity ny WhatsApp na dia fantatra aza fa ny fisamborana dia nalaina tamin'ny kinova beta an'ny iOS 2.17.1.869. Toy ny mahazatra matetika, indray mandeha ihany isika dia afaka miandry fotsiny izay hitranga amin'ny safidy hamafana hafatra ary raha manapa-kevitra ny orinasa hitondra azy amin'ny famokarana na tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Ny kinova WhatsApp manaraka dia hamela anao hamafa hafatra
Ianaro ny fomba hisorohana ny mpiasa Evernote tsy hamaky ny naotinao
Naharitra 13 minitra vao vita voalohany ny drôna Amazon